खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध? हामीले खाने खानाको निद्रासँग पनि गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। तसर्थ तपाईलाई दिउसै निद्राले झुमाएको छ वा बिहान अबेसम्म पनि ब्युझिन सक्नुभएको छैन भने यसको दोष खानेकुरामा पनि हुन्छ। बुधबार, असार ८, २०७९
अनुसन्धानको निष्कर्ष: पुरुषको तुलनामा महिलाको मस्तिष्क बढी तातो महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा बढी तातो हुने अध्ययनले देखाएको छ। ४० जना व्यक्तिमा गरिएको अनुसन्धानले महिलाको दिमागको तापक्रम औसतमा पुरुषको भन्दा ० दशमलव ४ डिग्री बढी पाइएको छ। शनिबार, असार ४, २०७९
छाला चम्किलो बनाउन यी खानेकुरा खाऔं हाम्रो वातावरणले पनि हाम्रो छालामा ठूलो प्रभाव पार्छ। प्रदूषण, तनाव, हामीले खाने र पिउने तरिका र हामीले सास लिने हावाले पनि हाम्रो छालालाई बिगार्छ। मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
खाली पेटमा मनतातो पानी पिउँदा हुने ५ फाइदा खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। पानीले तिर्खा मेट्ने मात्र होइन, यसको नियमित सेवनले सम्भावित कैयौं रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। शनिबार, जेठ २८, २०७९
गर्मी मौसममा के खाने, के नखाने? पोषण विज्ञहरुका अनुसार गर्मीमा मानव शरीरबाट अत्यधिक पसिना निस्कने कारण इलेक्ट्रोलाइट असन्तुलित बन्दछ। त्यसकारण नियमित खानाको अलावा फलफूल तथा सागसब्जी र प्रसस्त सलाद लिनु जरुरी हुन्छ। बिहीबार, जेठ २६, २०७९
राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ? यसो गरी हेरौं यूके र अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले राति नसुतीकन सक्रिय रहने मानिसहरूमा एक अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार सधैँ एउटै निश्चित समयमा सुत्ने गरेमा, क्याफिन नखाएमा र बिहान पर्याप्त घाममा बसेमा निद्रासम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ। बुधबार, जेठ २५, २०७९
गर्मी मौसममा स्वस्थ राख्ने खानेकुरा ‘गर्मी मौसम रोग पनि लिएर आउँछ’ भनिन्छ। मौसमले रोग ल्याउने होइन, मौसमअनुसारको खानपान शैली नअपनाउँदा बिरामी भइन्छ। शनिबार, जेठ २१, २०७९
चुरोट पिउन नहुने ४० कारण चुरोट सेवन गर्ने मानिसमा छालाको समस्या हुन्छ। यिनीहरूको छाला पहेँलो, फुस्रो र खुम्चिएको हुन्छ। छालामा रगत नपुगेर यो तन्किने सम्भावना हुन्छ। मंगलबार, जेठ १७, २०७९
मंकीपक्स के हो, कसरी सर्छ? यो रोग बिफर जस्तो घातक पनि छैन र कोभिड-१९ जस्तो संक्रामक पनि छैन। सोमबार, जेठ १६, २०७९
फ्रिजमा राख्न नहुने ८ खानेकुरा फ्रिजमा राख्नेबित्तिकै सबै खानेकुरा ताजा रहन्छन् भन्ने आम सोचाइ छ। अक्सर खानपिनका कुरा ताजा राख्न फ्रिजको सहारा लिइन्छ। तर, कतिपय खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा बिग्रिने मात्रै होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि अयोग्य हुन सक्छन्। शनिबार, जेठ १४, २०७९
विश्वभरि फैलने संकेत देखिएको मंकीपक्स के हो? कसरी थाहा पाउने संक्रमण? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)का अनुसार मंकीपक्स एउटा दुर्लभ किसिमको रोग हो, जुन मंकीपक्स नामक भाइरसका कारण हुन्छ। यो भाइरस दादुरा गरउने बेरियोला भाइरसकै प्रजातिसँग सम्बन्धित ‘अर्थोपक्स’ वंशको हो। शुक्रबार, जेठ १३, २०७९
मानसिक समस्याका कारण, १७ लक्षण र १० बच्ने उपायहरु नेपालमा एकदमै कम अध्ययन तथा राज्यको लगानी नभएको विषय हो मानसिक स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठनकले अनुसार नेपालमा २५ प्रतिशत मानिसलाई कुनै न प्रकारको मानसिक समस्या भएको तथ्य देखाएको छ। बुधबार, जेठ ११, २०७९
कसरी मिठो निद्रा पारेर लामो र स्वस्थ जीवन पाउने? यदि ओछ्यानमा २० मिनेटसम्म निदाउन सकिएन भने उठेर केही बेर हिँड्ने, पढ्ने वा अरू केही काम गरेर अलमलिनुपर्छ। त्यसो गर्दा फेरि सुत्न सजिलो हुन सक्छ। सोमबार, जेठ ९, २०७९
बाथका बिरामीले कस्ता खानेकुराबाट बच्ने? ओस्टियो बाथ औंला, घुँडा तथा हिपमा हुन्छ भने रुमाटाइड बाथ खुट्टाको जोर्नीमा हुन्छ। यसले ती अंग चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। परिवारमा पहिला कसैलाई बाथ भएकोे छ भने यसको चपेटामा अरु सदस्य पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। आइतबार, जेठ ८, २०७९
तनाव कसरी हटाउने? यस्ता छन् ११ उपाय तनावग्रस्त हुनुभयो भने यसले तपाईंको मन र शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ। तनाव निरन्तर लिने गर्नुभयो भने अनेक रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले तनाव घटाउन यस्तो उपाय अवलम्बन गर्नुस्ः शनिबार, जेठ ७, २०७९
ओछ्यानको तन्ना कति दिनमा फेर्ने, ढिलो तन्ना फेर्दा के हुन्छ? चाख लाग्दो कुरा के छ भने, सो सर्वेक्षणमा झन्डै आधा अविवाहित पुरुषले करिब चार महिनासम्म तिनको तन्ना नधोएको बताए। १२ प्रतिशत मानिसहरूले तन्ना गनाउन थालेपछि मात्र धुने वा तन्ना धुनुपर्ने समय आएको विचार आउने बताएका छन्। बुधबार, जेठ ४, २०७९
उच्च रक्तचापको रोकथाम र व्यवस्थापनका ७ उपाय परिवारमा यदि कोही उच्च रक्तचापबाट ग्रसित छन् भने तपाईंलाई पनि यो समस्या हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसका साथै कम शारीरिक क्रियाकलाप, बढ्दो तौल, रगतमा बढ्दो चिल्लोपना, धूमपान गर्नाले वा मधुमेह रोगले उच्च रक्तचाप हुने जोखिम बढाउँछ। मंगलबार, जेठ ३, २०७९
शरीरको तौल कम गर्न चाहनु हुन्छ? यसरी लसुनको सेवन गर्नुहाेस् लसुन नेपालीहरुको भान्सामा सजिलै पाईन्छ। लसुन धेरै पौष्टिक तत्वबाट भरिपूर्ण हुन्छ। शनिबार, वैशाख ३१, २०७९
मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? शरीरमा पानीको कमीले डिहाइड्रेसन होला धेरै समय लाइनमा बस्नुपर्ने, हिँडेर मतदान केन्द्र पुग्नुपर्ने र आफू जित्न वा आफ्नालाई जिताउन दिनभरि यताउता गरिरहनु पर्ने होला धेरैलाई। अघिल्लो दिन राति प्रशस्त निद्रा नपुगेको पनि हुन सक्छ कतिको। त्यसैले यो अवस्थामा पटक पटक पानी पिउन छुटाउनु हुँदैन। शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९
बिहान खाली पेट मनतातो पानी पिउनुका फाइदा बिहान उठेपछि खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनु शरीरका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। उमेलेको पानी मनतताो भएर शेलाएपछि पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। बुधबार, वैशाख २८, २०७९
महिलाले आफ्नो शरीरमा हुने क्यान्सरलाई कसरी पहिचान गर्ने? हामीले यो रोगलाई सुरुवातमै थाहा पाउन सकेमा पूर्णरूपमा उपचार गर्न संभव छ। तर, सुरुवाती चरणमै पत्ता लगाउन चिकित्सकभन्दा पहिले व्यक्तिले नै केही जानकारीहरू राख्नु पर्छ। यी क्यान्सरहरूबारे हामीले थोरै मात्र थाहा पायौं भने पनि त्यो पर्याप्त हुन्छ। शनिबार, वैशाख २४, २०७९
यी हुन् टाउको दुखाइका घरेलु औषधि दालचिनीलाई पिसेर पाउडर बनाउने र यसरी तयार भएको पाउडरमा पानी मिसाएर गाडा पेस्ट बनाउने। यसरी तयार भएको पेस्ट टाउकोमा लगाई ३० मिनेटपछि मनतातो पानीले धुने। शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९
गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी बँच्ने? यस्ता छन् पाँच उपाय डिहाइड्रेसन, पाचनप्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या, छालामा हुने सनबर्नजस्ता मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरु यो बेला देखिन्छन्। यस्तोमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी बँच्ने? बिहीबार, वैशाख २२, २०७९
निद्रा नपुग्दा निम्तने प्रमुख ५ स्वास्थ्य समस्या कम निद्राका कारण प्रतिरोधी क्षमता कमजोर पर्नसक्छ भने मस्तिष्कमा असर पर्दा मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ र शरीरमा विभिन्न रोगहरुले घर बनाउँछ। त्यसैले कम निद्राले कस्तो असर पर्छ त? बुधबार, वैशाख २१, २०७९
शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्न उपयुक्त हुन्छ? सी–सेक्सन अर्थात् सिजेरियन डेलिभरीपछि कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्नसकिन्छ भन्नेबारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। महिलाहरुले दोस्रो सन्तानको योजना कहिले गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने? बुधबार, वैशाख २१, २०७९
गर्मीमा शरीरलाई यसरी राख्नुहोस् फिट गर्मी सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा शरीरलाई फिट राख्नु जरुरी हुन्छ । गर्मीमा शरीरलाई फिट राख्न के–के गर्न सकिन्छ त? बुधबार, वैशाख २१, २०७९
खाना खाएपछि किन निद्रा लाग्छ? खाना खाएपछि निद्रा लाग्ने समस्या अधिकांशमा बिहान तथा दिउसो खाना खाएपछि देखिन्छ। खाना खाएपछि उँघ्नु, थकान लाग्नु, अल्छि लाग्नु, इनर्जी लेभल कम हुनु, कुनै काममा केन्द्रित नहुनु जस्ता समस्या धेरैमा देखिन्छ। शनिबार, वैशाख १७, २०७९